MM Popular – Page5– News And Videos
“နိုင်ငံကျော်မင်းသားများနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇနီးချောလေးများ” အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေရဲ့ လက်တွဲဖော်ဇနိးချောလေး တွေကလည်း ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူတွေပါပဲ။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ –
လူမှုကှနျရကျမှာ ပရိသတျတှကေိုဖမျးစားထားတဲ့ နိုငျငံကြျောမငျးသားတှထေဲမှာ လူပြိုကွီးတှရှေိသလို အားကစြရာကောငျးတဲ့အိမျထောငျရေးပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆယျလီတှရှေိကွပါတယျ။ အနုပညာရှငျနဲ့ ပတျသကျရငျ သူတို့ရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ မိသားစုဘဝအကွောငျးလေးတှကေိုလညျး ပရိသတျတှကေ စိတျဝငျတစားအားပေးကွပါတယျ။ 1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ ရဲ့ လူတွေမသိပေးတဲ့ ခိုးစားထားတဲ့ video ထွက်လာပြီ မဖြုတ်ချခင်မြန်မြန်ဝင်ကြည့်ကြ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မည်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား မိုးယုစံနဲ့ကောင်းပြည့်တဲ့ ချောင်းသာဟိုတယ်မှာ CCTV နဲ့ဖမ်းမိတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် …….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ အခုလေးတင် ချောင်းရိုက်လာတဲ့ကောင်ချောချောလေးနဲ့ကောင်မလေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား …
၄ကြိမ်အတွက် သေချာပေါက် 3dပေါက်ဂဏာန်းတင်ပေးလိုက်ပြီနော်.,freeပေးတယ်ဆိုပြီးမပေါ့ပါနဲ့…ထိုးချိန်မှီအောင် Shareထားလိုက်ပါ…မပေါက်ရင် ကြိုက်သလိုလုပ် အာမခံတယ်…3dကြည့်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ။
၄ကြိမ်အတွက် သေချာပေါက် 3dပေါက်ဂဏာန်းတင်ပေးလိုက်ပြီနော်.,freeပေးတယ်ဆိုပြီးမပေါ့ပါနဲ့…ထိုးချိန်မှီအောင် Shareထားလိုက်ပါ…မပေါက်ရင် ကြိုက်သလိုလုပ် အာမခံတယ်…3dကြည့်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ။ (1) ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဟယ် မြင့်မြတ်ကြီးလား ဘုရားဘုရား ပဲမြစ်လို့ထင်ထားတာ ကြီးမှကြီးမှ အခုမှ အသစ်ထွက်တဲ့ video မို့ ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းမြင်ရတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ၅ သိန်းပေးရင် ဘယ်သူခေါ်ခေါ် လိုက်တယ်ဟ ကြမ်းလိုက်တဲ့ ချောင်းရိုက် သွေးထွက်တာတောင်မြင်ရတယ် မြန်ဝင်ကြည့်ကြဟ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား မထင်ရဘူး …
လကျရှိ One Championship(MMA) ရဲ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျးကို ခဈြကွမယျထငျပါတယျ။ ဒီကနေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၃)ရကျနမှေ့ာ ထိုးသတျမယျ့ MMA ပွိုငျပှဲမှာတော့ အောငျလအနျဆနျးအပါအဝငျအခွား ပှဲ ၇ ပှဲထိပါဝငျမှဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ အဆိုပါပှဲတှငျ အဓိကပှဲအဖွငျ့ ကခငျြလူမြိုးဖွဈတဲ့ မွနျမာတို့ရဲ့ စပါးကွီးမွှေ Aung La N Sang နဲ့ ဘရာဇီးမှ Alexandre Machado တို့ရဲ့ ပှဲပဲဖွဈပါတယျ။ 1 ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ …
အစကတော့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တူပေမယ့် ခုတော့ စိတ်ပျက်သွားတယ်၊ ရိုက်လို့မရတော့ဘူး။ ပြောင်းလဲသွားပြီ မျက်နှာကြီးတွေ ဖွေးစွပ်ပြီးတော့၊ ဗိုက်ကြီးကပူပြီး၊ ဖင်ကြီးက ကောက်ထွက်နေတာ၊ ကုတ်ပိုးကြီးတွေတက်ပြီး တင်ပါးဆုံကြီးကထွက်နေတာ…..ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ပျက်သွားရခြင်းမှာ ကျော်ကျော်မျိုးကြောင့်ဟု တာဝန်ရှိသူများမှ အကြောင်းပြချက်ပေး
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ပျက်သွားရခြင်းမှာ ကျော်ကျော်မျိုးကြောင့်ဟု တာဝန်ရှိသူများမှ အကြောင်းပြချက်ပေး ———————————– 1 ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဟယ် မြင့်မြတ်ကြီးလား ဘုရားဘုရား ပဲမြစ်လို့ထင်ထားတာ ကြီးမှကြီးမှ အခုမှ အသစ်ထွက်တဲ့ video မို့ ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းမြင်ရတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ၅ သိန်းပေးရင် ဘယ်သူခေါ်ခေါ် လိုက်တယ်ဟ ကြမ်းလိုက်တဲ့ ချောင်းရိုက် သွေးထွက်တာတောင်မြင်ရတယ် မြန်ဝင်ကြည့်ကြဟ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား မထင်ရဘူး ဘုန်းကြီးနဲ့ …
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး(လမ်းဟောင်း) မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၆/၁ နှင့်၂ အကြား ၀မ်းဘဲအင်းကျေးရွာ အနီးတွင် (၁၉.၁.၂၀၁၄)နေ့ ညနေ(၄း၃၀)အချိန်ခန့်က ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ (1) ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဟယ် မြင့်မြတ်ကြီးလား ဘုရားဘုရား ပဲမြစ်လို့ထင်ထားတာ ကြီးမှကြီးမှ အခုမှ အသစ်ထွက်တဲ့ video မို့ ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းမြင်ရတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ၅ သိန်းပေးရင် ဘယ်သူခေါ်ခေါ် လိုက်တယ်ဟ ကြမ်းလိုက်တဲ့ …
”သားသမီးတော့ လာမထိနဲ့နော်” လို့သတိပေးလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း….ဒေါသထွက်နေတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 915 တုန်းကလို တလုံးတည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 915 တုန်းကလို တလုံးတည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ (1) ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဟယ် မြင့်မြတ်ကြီးလား ဘုရားဘုရား ပဲမြစ်လို့ထင်ထားတာ ကြီးမှကြီးမှ အခုမှ အသစ်ထွက်တဲ့ video မို့ ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းမြင်ရတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ …
အကယ်ဒမီရ မင်းသမီးငယ်တစ်ယောက်နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်နေ
1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…….အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်ဒမီရ မင်းသမီးငယ်တစ်ယောက်နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ …
“နန္ဒာလှိုင် လိုက်ပါစီးနင်းမည့်လေယာဉ် စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွား” ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင်ကတော့ ကျောက်ပန်းတောင်း ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ (၁) ခုအတွက်………
အနုပညာလောကရဲ့ နာမညျကွီးမငျးသမီးတဈလကျဖွဈခဲ့သလို ယခုအခြိနျထိ ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့ အကယျဒမီ နန်ဒာလှိုငျ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှဝေဆောနခြေိနျမှာ အိမျထောငျပွုခဲ့ပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို အားလုံးရပျနားခဲ့တဲ့သူမကတော့ လကျရှိမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျလို့နပေါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် …